DHMI 9 manambara ny sary isam-bolana - RayHaber
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06DHMİ 9 Manambara ny sary isam-bolana
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Headline, TORKIA 0
dhmi manambara isam-bolana
Tale jeneralin'ny Ivotoeram-piaramanidina Airports (DHMI), taona 2019 tamin'ny volana septambra ny fiaramanidina fiaramanidina, mpandeha ary antontan'isa momba ny entana.
Araka izany, tamin'ny volana septambra; Ny isan'ny fiaramanidina nandeha sy nandeha tamin'ny seranam-piaramanidina dia 77.365 ho an'ny sidina an-trano ary 75.465 amin'ny sidina iraisam-pirenena. Nahatratra ny 194.923 ny fitateram-piaramanidina maneran-tany izay be loatra.
Tamin'ny Septambra, Torkia mpandeha fifamoivoizana ny fanompoana ao an-tokantrano ao amin'ny seranam-piaramanidina manerana an'i 8.668.089, 12.240.602 i mpandeha iraisam-pirenena fifamoivoizana. Ny fifamoivoizana fitateram-bahoaka niaraka tamin'ny mpandeha fitateram-bahoaka mivantana dia nahatsapa ho 20.929.426.
Fiantsonan'ny seranam-piaramanidina (entana, mailaka ary entana); Tamin'ny volana septambra, ny 81.084 taonina ao anaty tsipika an-trano sy ny 244.718 taonina amin'ny zotra iraisam-pirenena dia nahatratra 325.802 taonina.
9 VONDRONA (JANOARY-SEPTEMBRE) AIRCRAFT, PASSENGER ary TRAFFIC
2019 hatramin'ny faran'ny volana septambra; Ny fifamoivoizana fiaramanidina mankany ary avy amin'ny seranam-piaramanidina dia 636.771 amin'ny sidina an-trano ary 554.646 amin'ny sidina iraisam-pirenena. Araka izany, tonga tany 1.550.588 ny fifamoivoizana be dia be tamin'ny overlay.
Torkia 76.431.401 ny mpandeha an-trano ankapobeny fifamoivoizana seranam-piaramanidina, izay mpandeha fifamoivoizana iraisam-pirenena nandritra io vanim-potoana ny fitaterana mpandeha 84.828.052 mivantana niaraka tamin'ny mpandeha tanteraka ny fifamoivoizana nijanona teo 161.482.868.
Fiantsonan'ny seranam-piaramanidina (entana, mailaka ary entana); 626.460 taonina ao amin'ny tsipika an-trano sy ny 1.865.412 taonina amin'ny tsipika iraisam-pirenena.
Ny fiaramanidina niala sy nandao ny seranam-piaramanidina Istanbul tamin'ny volana septambra lasa 9.369 tamin'ny sidina an-trano, 28.960 amin'ny sidina iraisam-pirenena sy ny 38.329. Ny fifamoivoizana mpandeha 1.483.994 rehetra, anisan'izany ny 4.783.667 amin'ny andalana an-trano ary ny 6.267.661 amin'ny andalana iraisampirenena, no tanteraka.
Tao amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk, izay mitohy ny hetsika fiaramanidina sy ny fitaterana entana, ny fifamoivoizana fiaramanidina 2019 dia notanterahina tamin'ny volana Janoary-septambra 130.229. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Atatürk, ireo mpandeha 16.072.534 dia notompoina nandritra ny vanim-potoana janoary-Aprily ka hatramin'ny fanokafana ny seranam-piaramanidina Istanbul.
Ny fiaramanidina 222.435 sy ny mpandeha 35.574.890 mpandeha dia tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul tao sivy volana. Araka izany, ny fifamoivoizana an'habakabaka 352.664 sy ny fifamoivoizana 51.647.424 ihany no no tonga tamin'ireny seranam-piaramanidina roa ireny.
9 RANOMANANA VONDRONA, SORATOMANANA ARY FAMPIDIRANANA TOERISM-PIVAVAHANA
Ny isan'ireo mpandeha niasa tamin'ny 9 isam-bolana dia nihoatra ny 47 tapitrisa ao amin'ny seranam-piaramanidina mifototra amin'ny fizahantany izay be ny fifamoivoizana iraisam-pirenena. 16.035.492 ny mpandeha mpandeha amin'ny mpandeha an-trano, 31.556.514 amin'ny sehatra iraisam-pirenena; Ny fifamoivoizana an'habakabaka dia 121.877 amin'ny sidina an-trano sy ny 184.790 amin'ny sidina iraisam-pirenena.
Ny angon-drakitra isam-bolana 9 an'ny seranam-piaramanidina eto amin'ny ivom-pizahantany dia toy izao manaraka izao:
Izmir Adnan Menderes Airport dia nahazo sidina 6.875.544, sidina iraisam-pirenena 2.686.942 ary mpandeha 9.562.486.
Tao amin'ny seranam-piaramanidina Antalya, nisy mpandeha 5.399.599 notolorana amina, anisan'izany ny mpandeha 23.929.236 an-trano sy ny 29.328.835 iraisam-pirenena mpandeha.
Ao amin'ny seranam-piaramanidina Muğla Dalaman, ny fifamoivoizana mpandeha 1.280.104 rehetra, anisan'izany ny 2.711.541 amin'ny sidina an-trano sy ny 3.991.645 amin'ny sidina iraisam-pirenena.
Ny seranam-piaramanidina Muğla Milas-Bodrum dia manana ny isan'ny mpandeha an-trano 2.089.603 sy ny isan'ny mpandeha 1.702.491. Ny mpandeha 3.792.094 rehetra no nanompo.
Ny isan'ny mpandeha an-trano sy iraisam-pirenena ao amin'ny seranam-piaramanidina Gazipaşa Alanya dia 390.642. Nahatratra ny 526.304 ny isan'ireo mpandeha.
Ny DHMI dia manambara ny fiaramanidina, ny fiaramanidina ary ny cargo amin'ny volana febroary 06 / 03 / 2019 Ny Tale Jeneralin'ny Fahefana ao an-tampon'ny Fanjakana (DHMI), 2019 ho an'ny volana febroary ny fiaramanidina, ny mpandeha sy ny statistika dia nanambara. Noho izany, 2019 amin'ny Febroary; Ny fifamoivoizana fiaramanidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina dia 60.198 amin'ny fiaramanidina an-tokantrano ary 37.037 amin'ny sidina iraisam-pirenena. Ny fifamoivoizana momba ny lozam-pifamoivoizana tamin'io volana io dia 33.253. Noho izany, ny seranam-piaramanidina fitaterana an-dalamby dia nahatratra ny 130.488 niaraka tamin'ny pasitera. Airports manerana an'i Torkia tamin'ity volana ity mpandeha an-trano 7.618.937 fifamoivoizana, raha mpandeha iraisam-pirenena dia 5.131.874 fifamoivoizana. Noho izany, ny mpandeha rehetra manana mpandeha sasatra mivantana ayda
DHI dia manambara amin'ny endrika Jolay 07 / 08 / 2019 Tale jeneralin'ny Ivotoeram-piaramanidina airports (DHMİ), taona 2019 tamin'ny Jolay, ny fiaramanidina fiaramanidina, ny mpandeha ary ny antontan'isa momba ny entana. Araka izany, ny 2019 tamin'ny Jolay; Ny fifamoivoizana fiaramanidina mankany ary avy any amin'ny seranam-piaramanidina dia 79.311 amin'ny sidina an-trano sy 83.547 amin'ny sidina iraisam-pirenena. Ny fifamoivoizana be loatra tamin'iny volana iny dia 44.660. Araka izany, tonga tany amin'ny 207.518 ny haben'ny fifamoivoizana an'habakabaka izay tonga tato amin'ny seranam-piaramanidina. Airports manerana an'i Torkia tamin'ity volana ity mpandeha an-trano 9.122.161 fifamoivoizana, raha mpandeha iraisam-pirenena dia 12.897.411 fifamoivoizana. Araka izany, ny fifamoivoizana fitateram-bahoaka miaraka amin'ireo mpandeha fitateram-bahoaka mivantana ao anatin'io volana io ...
State Airports Fahefana General Manager Funda tamin'ny Janoary, 'DHMİ Running Torkia Flying' 29 / 01 / 2019 Ny tale jeneraly sy ny Filohan'ny Tale lefitra ao amin'ny Fitondram-panjakana Statea Funda Ocak, dia nanome vaovao momba ireo tetikasa mitohy amin'ny fizarany amin'ny kaonty Twitter ofisialy. Indreto ny ampahan'ny Ocak Maneran-tany: Nahazo fandrosoana goavana teo amin'ny sehatry ny fiaramanidina sivily ny firenentsika ary nahatratra teboka iray izay fivoarana haingana indrindra tany Eoropa ary nohajaina tao amin'ny serivisy sivily manerantany. Tsy isalasalana fa nahomby ireo politikan'ny fitaterana nampidirina nandritra ny taona 17 farany tamin'ny fahombiazany. Azoko lazaina fa misy ny seranan-tsambo sy seranan-tsambo maoderina kokoa noho ny namany eto amin'izao tontolo izao. DHMİ dia marika erantany mifandraika amin'ny fandaminana sy ny fampandrosoana teknolojia amin'ny alàlan'ny tetikasa lehibe napetraka ...
Manambara ny Numbers amin'ny volana Aprily ny manampahefana malemy 09 / 05 / 2017 Mpiandraikitra-Sen hanoanana-fahantrana dia manambara Aprily tarehimarika: manamboninahitra-Sen natao tsy tapaka isam-bolana "ny hanoanana-fahantrana" fikarohana, 4 olona noana tokonam-baravarana ho an'ny fianakaviana iray any Torkia 1.725,18 TL, ny fahantrana lehibe dia teo amin'ny 4.715,65 TL. Mpiandraikitra-Sen tamin'ny Aprily, araka ny hanoanana-fahantrana fikarohana natao tsy tapaka isam-bolana ny Confederation 4 olona noana 1.725,18 tokonam-baravarana ho an'ny fianakaviana iray any Torkia TL, ny fahantrana Tapa-kevitra toy ny isan-4.715,65. Araka ny fikarohana, ny vidin-tsakafo tamin'ny volana Aprily dia ampitahaina amin'ny fihenan'ny vidin'ny 0,49'lu tamin'ny volana Martsa dia niaina. Ny fitomboana lehibe amin'ny volana Aprily dia voatabia, miaraka amin'ny fitomboan'ny 61,03 yüzde
Nanambara ny nomeraon'ny nomerao ny mpitandro filaminana sy ny hanoanana 08 / 06 / 2017 Mpiandraikitra-Sen hanoanana-fahantrana manambara May Month Figures: manamboninahitra-Sen tsy tapaka nitarika isam-bolana, "araka ny hanoanana-fahantrana" Enga anie ny fikarohana vokatry ny volana, 4 olona noana tokonam-baravarana ho an'ny fianakaviana iray any Torkia 1.696,35 TL, ny fahantrana lehibe dia teo amin'ny 4.721,80 TL . Mpiandraikitra-Sen Confederation hatao tsy tapaka isam-bolana ny hanoanana-fahantrana fikarohana Araka ny fianakaviana ao Torkia in May 4 1.696,35 £ tokonam-baravarana ny hanoanana, ny fahantrana Tapa-kevitra toy ny isan-4.721,80. Araka ny fandinihana, ny vidin'ny sakafo tamin'ny volana mey dia nitombo tamin'ny isa 1,67 isan-jato raha oharina tamin'ny volana Aprily. Ny fitomboan'ny fitomboan'ny volana May dia yüzde
DHI dia manambara amin'ny endrika Jolay
State Airports Fahefana General Manager Funda tamin'ny Janoary, 'DHMİ Running Torkia Flying'
Manambara ny Numbers amin'ny volana Aprily ny manampahefana malemy
Nanambara ny nomeraon'ny nomerao ny mpitandro filaminana sy ny hanoanana
Minisitry ny fadin-tseranana manambara ny sary sy ny fandefasana
DHMİ dia manambara ny fiaramanidina, ny fiara fitaterana sy ny fitaterana entana ho an'ny 2018 tamin'ny volana Aogositra
Manambara ny '5 74 Million Million People Fly in Month' ny DHMI